Ghostwriter Sport I Waxaan kuu diyaarinay barashada joornaalada
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah sayniska isboortiga
Daraasadda sayniska isboortiga, waxyaabo badan ayaa ku saabsan isboortiga. Tan waxaa ka mid ah tababaro ficil iyo habab ah oo ku saabsan isboorti kala duwan. Laakiin koorsadan sidoo kale waxaa ku jira aragti badan oo ku saabsan isboortiga. Abitur waa shuruud shuruud u ah barashada jaamacad. Qaar ka mid ah jaamacadaha tacliinta sare ayaa sidoo kale bixiya daraasado isboorti, laakiin shuruud ayaa sidoo kale ah diblooma farsamo. Haddii aad rabto inaad wax ku barato isboortiga hadafka mustaqbal ee barista, waxaad ku sameyn kartaa oo keliya adoo ku daraya maado kale.
Darajadu waxay u horseedaa midkood Bachelor of Science kadib 6 semestar ama Master of Science kadib 4 semestar kale. Mawduuca fikirka-sayniska ee koorsada sayniska isboortiga waxaa ka mid ah tabobar, barbaarin iyo taariikhda isboortiga. Waxa kale oo jira sayniska tababarka, sharciga isboortiga, maamulka isboortiga iyo daawada isboortiga. Qeybaha ugu muhiimsan ee daraasadda waa dhaqaalaha isboortiga, ka hortagga, dhaqan celinta, iyo cayaaraha tartanka. Dhinacyada dhaqaalaha ayaa sidoo kale la baaraa. Kuwaas waxaa ka mid ah suuqgeynta, ilaha aadanaha, xisaabinta shirkadaha, tikniyoolajiyadda soo bandhigidda, ganacsiga Ingiriiska.
In maadooyin badan oo cilmiyaysan iyo aragti ahaaneedba waa inaad ku qortaa waraaqo xilliyeed iyo waraaqo xilliyeed. Waxa kale oo jira imtixaano badan oo adag oo loo gudbiyo maaddooyinka shaqsiyeed. Kuwaani waa in la dhaafayaa kahor intaadan helin shahaadada. Waan ku faraxsanaan lahayn inaan kuu abuuro taada Shaqada guriga, shahaadada bachelor oder shahaadada Masterka. Kaliya nala soo xiriir oo noo sheeg dhibaatadaada ama howshaada. Waan kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhakhsaha badan. Dabcan waad awoodaa sidoo kale kadib markaad dirto Foomka xiriirka sii wad inaad bixiso inaad si toos ah u dalbato shaqada. Shirkadeena waxay diirada saareysaa caawinta dhibaatooyinka ardayda. Waxaan bixinaa tayo hufan, waxaan la kulannaa waqtigeena ugu dambeeya waxaadna heli doontaa wax khaldan oo shaqadaada ah. Waqtigan xaadirka ah, sidoo kale, waxaan kaa caawin karnaa oo aan ku siin karnaa adiga Shaqada farsamada abuur Kaliya nala qaado Kontakt tusaale ahaan by Mail oder phone ama codso mid bilaash ah dib u xusuusasho mid. Kadib waxaan kuu soo wici doonnaa gebi ahaanba bilaash oo waxaan duubi doonnaa mashruucaaga. Shaqada tacliimeed, waa inaad kireysataa hay'addeena qorista qoraaga.
Koorsada dabcan waxay leedahay dhowr diiradood oo kala duwan oo aad u dooran karto arday ahaan.
Sayniska isboortiga, waxaad leedahay dhowr qaybood oo ay tahay inaad si guul ah ugu gudubto si aad u qalin jabiso. Mawduucyada soo socda ayaa asal ahaan ka mid ah maadooyinka ay tahay in la gudbiyo:
Istaraatijiyadaha isboortiga xirfadeed
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrad sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista waxayna horeyba uga sii fiicnaadeen dhammaystirka shahaadadooda. Aqoontan kuma qabsan kartid muddo kooban. Qorayaasheennu way ku faraxsan yihiin inay qoraan shaqadaada. Faa'iidadaas ka dhig mid adiga kuu gaar ah. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ka gudubto maaddooyinka la baaray. Waad awoodi kartaa qiimaheena. Waxaan ku siineynaa tayo hufan, waxaan la kulannaa waqtigeena ugu dambeeya waxaadna heli doontaa wax khaldan oo shaqadaada ah. Tani waxay muujineysaa in waxyaabaha ku jira ay yihiin kuwo gaar ah oo shaqadaadu tahay mid gaar ah. Marka lagu daro barnaamijkaaga shahaadada, ardayda ka qalin jabisay ganacsiga ama kuwa mustaqbalka ka soo qalin jebinaya sidoo kale waxay inta badan isticmaalaan adeegeena Si aad u gaarto shahaadada tacliinta, waxaa aad u faa iido badan inaad haysato cayaaryahan la isku halleyn karo oo ku garab taagan. Waxaan ilaalineynaa waqtigeena ugu dambeeya, waxaan bixinnaa tayo wanaagsan waxaanan ku siineynaa taageero. Waad isku halleyn kartaa, anaga ayaa diyaar u ah inaan sida ugu fiican kaaga soo baxno. Waad ku kalsoonaan kartaa
Qorayaasheennu waxay leeyihiin waayo-aragnimo sannado badan leh aqoontaanna waxay ku abuuri karaan waxyaabo badan oo aan adiga lagaa fikiri karin muddo gaaban. La xiriir Si fudud noo soo dir an Mail oder phone. Waan duubi doonnaa hawshaada isla markaana waan ku siin doonnaa isla markiiba dalab by. Hadda nala soo xiriir oo dalbo taada shahaadada Masterka oder Maqalka. Waxaad sidoo kale na siin kartaa mid dib u xusuusasho si loo hagaajiyo Kadib waxaan kuu soo wici doonnaa waqti adiga kugu habboon. Qorayaasheennu waxay ka caawin doonaan abuurista iyo su'aalaha. Qorayaashayagu waxay qoraan shaqadaada.
Cilmigaaga Shaqada guriga, shahaadada Masterka, Qoraalka PhD ama waxaad noogu soo qori kartaa qoraalkaaga. Si aad u hesho darajo wanaagsan, waa inaad caawimaad raadsataa. Sababtoo ah hawlo badan oo hordhac ah waa in la qabtaa si loo soo gudbiyo shaqo cilmiyaysan oo wanaagsan. Waa inaad si joogto ah uga shaqeysaa iyada oo aan lagaa dhex gelin, haddii kale waxaad si dhakhso leh uga bixi doontaa mawduuca. Ka tag cilmigaaga Shaqada guriga qor.
Xogtaada waa la qarin doonaa lana daaweyn doonaa iyadoo la raacayo tilmaamaha ilaalinta xogta. Qorayaashayagu waxay ku heli doonaan amarkaaga gebi ahaanba si qarsoodi ah waxayna u shaqeyn doonaan si waafaqsan shuruudahaaga iyo rabitaankaaga. Fadlan noo soo dir hawshaada, waxaan ku farxi doonnaa inaan ka wada hadalno. - Qormooyinka qorayaasha ee shirkadda Papernerds waxay kaa caawinayaan shaqada guriga ama qoraalkaaga. Aqoonyahannada miisaanka leh ee taariikhda, maamulka ganacsiga, injineernimada warshadaha iyo cilmu-nafsiga ayaa sidoo kale ku faraxsan inay aqbalaan caawimaaddeena. Waxay macno u leedahay in lagu taageero taageerada shaqada sayniska. Qiimaheena waxaad badanaa ka dalban kartaa inaad ka fogaato culeysyada dhaqaale. Qoraayaasha cirfiidka tacliinta ama sayniska ayaa ku garab taagan. Guushaadu aad ayey muhiim ugu tahay qoraayaasheena!
Qoraalka ghost ee sayniska isboortiga
Qorayaashayagu waxay ku leeyihiin khibrad sannado badan sayniska isboortiga waxayna horeyba shaqo badan ugu qoreen aaggan. Kama baran kartid aqoontan toddobaadyo gudahood. Qorayaashayaga cirfiidka ayaa kaa caawin kara adiga Shaqada guriga, Warqad aqoon kororsi ah, shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, Qoraal oder Qoraalka PhD ku caawi qiimo weyn. Qiimaheena hoose ee ghostwriting wuxuu ku siinayaa xorriyadda mashaariicdaada kale.
Sayniska isboortiga ee cilmi baarista
Sayniska isboortiga waa mowduuc caan ku ah cilmi baarista. Waxay baaraan horumarin suurtagal ah si cayaartoyda looga dhigo xitaa kuwa ugu guuleysta shaqadooda. Dhaqdhaqaaqyadee ayaa ugu waxtar badan cayaaraha X iyo sidee. Maxay yihiin khataraha haddii dhaqdhaqaaqa si kale loo fuliyo. Waxay sidoo kale sameeyaan daraasado muddo dheer ah si ay uga soo baxaan talooyinka waxqabadka. Qoraa-yahankeenna aqoonta leh ayaa shaqada kuu qaban doona.
Sayniska isboortiga ee nolosha xirfadeed
Fursadaha shaqooyinka ka dib barashada sayniska isboortiga way kala duwan yihiin: Waxaad ikhtiyaar u leedahay aqoon-cilmiyeed Si aad shaqo u sameysato. Qeybta ugu weyn ee xirfadeed, si kastaba ha noqotee, waxay noqon doontaa macalinka jimicsiga jirdhiska ee iskuulada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Waxaad sidoo kale fursad u leedahay inaad ka shaqeyso ururada isboortiga ama naadiyada. Isboortiga loogu talagalay dadka naafada ah iyo tas-hiilaadka isboortiga ee rugaha caafimaadku waa meherado kale oo firfircoon ka dib marka la dhammeeyo shahaadada isboortiga. Waxaad sidoo kale ka shaqeyn kartaa soo saaraha qalabka isboortiga ama iskuulka. Si aad u gaarto hadafkaaga, waxaan si caqli-gal ah kaaga caawin doonnaa maadadaada. Shaqada sayniska waxaa noogu soo gudbiya qoraayaasheena cirfiidka oo tayo wanaagsan leh waqtigaaga ugu dambeeya. Wax ka samee! Waan kaa caawin doonaa erfolg keen!
Aagga sayniska isboortiga ee shirkadaha ganacsiga
Shirkadaha ganacsiga sida soosaarayaasha isboortiga ee Nike ama Adidas iyo Puma ee Herzogenaurach ayaa aad u xiiseynaya ardayda qalin jabisay ee cusub. Waxay fikrado cusub u keenaan shirkadda waxayna kordhiyaan iibka. Si tan loo sameeyo, si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad dhammaysato shahaadadaada. Kaliya qaado Kontakt anaga. Waxaan kuu xallinaynaa dhibaatada adiga!
Hubinta tayada ee duurka sayniska isboortiga